IiSeti zokulala eziNtofontofo zokuQokelelwa kweHotele, iSitishi seSitishi seDuvet seSitishi seSigqubuthelo seSigqubuthelo seHotele, abavelisi, ababoneleli, umzi-mveliso-Zhejiang Rancho Santa Fe ekhaya textile Co.,Ltd
Ukuqokelelwa kwehotele Ikhava yokuHanjiswa kweSeti yokuThambisa iiSeti zokuLungiselela iiBhedi
Inani Model: G2012
●Iziphu engabonakaliyo ikunceda ukuba ufake kwaye ususe iduvethi yakho ngokulula kakhulu.Iipillowcase ezivaliweyo imvulophu.Izibonda ezikwikona ezine ziya kunceda ukugcina i-duvet yakho isendaweni,Ichukumisa kakuhle kwaye icocekile, izipho ezintle zosapho kunye nezihlobo.
● Uphawu: Le seti yesigqubuthelo seduvet yenza ukuba ihotele ijongeke kakuhle kwigumbi lakho lokulala. ikuzisele amava obutofotofo behotele kubutofotofo bendlu yakho. ngebhanti eblue ethungelwe kwiseti eqinileyo yesigqubuthelo seduvet, yenza isimbo esicacileyo sicace ngakumbi. kunye necontemporary.ibhedi ethambileyo ngokumangalisayo yenza indawo entle kunye nepholileyo ukuze ulale ngaphakathi.
● Umyalelo wokuvasa: Umatshini uyahlambeka, uyawa kubushushu obuphantsi, uku-ayina akufuneki.
Igama lemveliso Hotel Collection Duvet Cover Set Thunga iiSeti zokulala eziNtofontofo
Iphethini emhlophe eFoldele eyenziwe ngokwezifiso zeplastikhi ebhedini ebekelwe ihotele
Isitayile saseYurophu esinexabiso elipholileyo sokuhombisa iimpahla kwigumbi labantwana
Uhlobo lwe-Bedspread-chic HF29010